Sida loo rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10 | Wararka IPhone
Paul Aparicio | | macruufka 10
Tani waxay noqotay wax lala yaabo, ugu yaraan qayb ahaan: Apple waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10 daqiiqado ka hor.Ka badan oo naga mid ah ayaa aaminsanahay in beta-ga ugu horreeya ee dadweynaha la bilaabi doono isla usbuuca kan saddexaad ee loogu talagalay kuwa soo-saareyaasha laakiin, sida waxay horey u sii hor mariyeen warbaahin badan, Apple waxay bedeshay khariidada loo yaqaan 'roadmap' ee la calaamadeeyay sanadkii hore waana sameysay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10 waxaa la sii daayaa isla usbuuca sida usbuuca labaad ee loogu talagalay horumariyeyaasha (oo ay ku soo beegmayso wax kasta oo ku dhow).
Apple ayaa horay u shaacisay WWDC in beta-ka dadweynaha uu imaan doono bisha Luulyo, laakiin ma uusan bixin taariikh cayiman. Markaan horey u tijaabinay beta-labaad, waxaan fahmi karnaa in Apple ay sifiican u isticmaashay seddexdii usbuuc ee kasoo gudbay bilowga beta-ka koowaad ilaa furitaanka kan labaad waxayna go'aansan laheyd inay horeyba u bislaatay in loo diyaariyo qofkasta oo raba inuu tijaabiyo.
Sida loo rakibo iOS 10 beta beta
Ku rakibidda beta-ka dadweynaha way ka sahlan tahay inaad ku sameyso nooca soo-saaraha mana u baahnaan doonno inaan raadino astaanta ama ku rakibno Xcode 8 beta. Waxaan ku sameyn doonnaa annaga oo raacayna talaabooyinkan:
Aan aadno Bogga barnaamijka softiweerka Apple beta ka CADADKA. Waxaan tan ka samayn karnaa kombiyuutar kasta, laakiin haddii aan ka qabanno nidaamka oo dhan qalabka aan dooneyno inaan ku rakibno beta, ayaa ka sii fiican.
Waan ciyaarnay U heeso (iska qor. Haddii aad horeyba u qortay, tag "Heesta").
Waxaan dhigay our Aqoonsiga Apple waanan ciyaarnay U heeso/ Saxeex soo gal.
Haddii aan ku hayno xaqiijinta laba tallaabo, waxaan kuu sheegeynaa aaladda lagu helo fariinta oo aan galno.
Waxaan aqbalnaa shuruudaha isticmaalka.
Hadda qalabkeena macruufka ah, waxaan u soconaaqor qalabkaaga".
Waxaan doorannaa macruufka.
Waxaan u soconaa beta.apple.com/profile, waxaan kala soo baxnaa astaanta oo aan rakibnay.
Haddii aad na weydiiso inaan dib u bilowno, dib ayaan u bilaabaynaa.
Ugu dambeyntiina, waan sameyn doonnaa Dejinta / Guud / Cusboonaysiinta barnaamijka oo cusbooneysii.
Sidii aan horey u soo sheegnay, beta-ga ugu horeeya ee dadweynaha wuxuu la mid yahay kan labaad ee loogu talagalay horumariyeyaasha, haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan wararka ku jira beta-kan labaad, waa inaad akhridaa maqaalkeenna Kuwani waa dhammaan wararka ku jira iOS 10 beta 2. Haddii aad rakibto, ha ka waaban inaad uga tagto khibradahaaga faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 10 » Sida loo rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10, hadda waa la heli karaa
CIISE DAVID dijo
Beta ma la rakibi karaa markii laga soo daabaco itunes? Mase sii wadi doontaa inay siiso qaladka faraxsan 14? Waxaan leeyahay daaqado mana rakibi karo xcode laakiin waxaan rabaa inaan macruufka 10 nadiif ah ka dhigo ...
Jawaab ciise ciise
Waa maxay farxadda aad i siineyso Pablo hadda haa. Uma arko wax dhib ah iyada oo lala macaamilayo iyada sababta oo ah arinta khuseeya arimaha gaarka ah baryahan dambe si dhab ah ayaan uqaataa. Marka waad ogtahay ragga, ha isku mashquulin, waxaad siineysaa isku xirka aad adigu dhigtay oo aad u wado si fudud oo rasmi ah
Fernelis ilaaliye dijo
Ma awoodi doontid inaad rakibtid iOS 10 nadiif ah illaa la daabaco, inaad soo dejiso mooyee .ispw beta mooyee
Jawaab Fernelis Ranger
Carlos Pizarro Christi dijo
Adoo haysta horumariye 2, suurta gal ma tahay in loo tago dadweynaha 1?
Ku jawaab Carlos Pizarro Cristi
Cidna (@jimburdalo) dijo
Waxaan hayaa soosaaraha beta 2 cilladda keliya ee aan ilaa hadda helay waa inay batteriga si dhakhso leh u cuntid Inta kale waa mid aad iyo aad u deggan
Jawaab Cidna (@jmburdalo)
Waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo OTA, laakiin JAILBILAJ dartiis cusbooneysiinta uma muuqato. Maxaan sameeyaa ?? Tirtir fariidin ah
Oscar Edward dijo
Ma heli karo cusbooneysiinta macruufka 10. Waxaa u sabab ah JAILBREAK, maxaan sameeyaa?
Jawaab Oscar Eduardo
Ma lihi jb laakiin isla waxbaa igu dhacay waana inaan dib u cusbooneysiiyo astaanta mar labaad si aan u muujiyo
Ku jawaab zirogirls
Waxaan hayaa soosaaraha beta 2 oo waxaan soo degsaday muuqaalka beta-ga dadweynaha oo cusbooneysiinta lama soo dejin karo, ma aadi karo beta-ka dadweynaha?
Haddii aad leedahay beta 2 ee soo-saareyaasha, ma aadi kartid beta-furan, ugu yaraan waxba igama soo degsadaan
Anigana ma ihi, laakiin maxaa yeelay waxaan qiyaasayaa inay isku wax noqon doonaan. Aynu sugno si aan u aragno waxa dhacaya markii saddexaad ee loogu talagalay horumariyeyaasha ama dadweynaha labaad ay soo baxaan ...
Jawaab Gersam García
Beta 2 ma la mid tahay nooca loo yaqaan 'Beta Public'? Mise way kala duwan yihiin dhismayaal?
Waxay bixisaa qalad markaad isku dayeyso inaad soo dejiso nooca beta, adigoo ku soo dejinaya bogga Apple, qofna ma garanayaa sababta?!?!?
Ku jawaab Genma
Kadib markaan rakibo beta-ka oo aan tijaabiyo waxaan rabaa inaan dib ugu laabto nuqulkii hore ee macruufka, kaliya waa inaan ka tirtiraa astaanta ama wax kale.
Ku jawaab Darek
Qof ma ii sheegi karaa sida looga hortago taleefanka inuu furayo kaliya adoo guriga ku cadaadinaya? Raad iyo wax toona midkoodna ... tani ma noqon karto
José, wixii aan ku tijaabiyay, waa la furay kaliya adoo riixaya badhanka guriga haddii aad isticmaasho mid ka mid ah faraha leh faraha faraha ka diiwaan gashan. Fari kale oo kasta, lama furin, laakiin kumbuyuutarka ayaa u muuqda inuu galayo lambarka amniga.
Runtu waxay tahay in iOS 10 ay aad u fiican tahay, laakiin ka taxaddar in beta-kani batteriga si dhakhso leh loo cuno. Waxaan hayaa iPhone 6 oo waxay socotaa maalin ugu badnaan. Illaa iyo hadda wax dhibaato ah kama helin, laakiin kuwa u baahan moobilku inay shaqeeyaan, waa inay tixgeliyaan arrinta batteriga ka hor inta aan la bilaabin beta-kan.
Maaddaama chrome uusan tagin, waa inaad ka sameysaa safari, haddii ay dhacdo inuu qof ku dhaco isagana.
Sida loo tijaabiyo Beta Dadweynaha ee iOS 10 iyo macOS Sierra